चीन आधुनिक सिरेमिक washdown एक टुक्रा दोहोरो फ्लश शौचालय कारखाना र आपूर्तिकर्ता | बेले
आधुनिक सिरेमिक washdown एक टुक्रा डुअल फ्लश शौचालय
अनुकूलित लोगो (न्यूनतम आदेश: ५० टुक्रा)
अनुकूलित प्याकेजि (्ग (न्यूनतम आदेश: ५० टुक्रा)
ग्राफिक अनुकूलन (न्यूनतम आदेश: ५० टुक्रा)
वारेन्टी:3साल बफर कभर प्लेट: हो
मिश्रण। पिट स्पेसिंग: 180 मिमी Flushing Flowrate: ३/6एल
फ्लशिंग बटन प्रकार: माथिल्लो-थिच्ने दुई-अन्त प्रकार बिक्री पछि सेवा: अन्य
तौल: ५१-60० केजी परियोजना समाधान क्षमता: अरु
आवेदन: होटल डिजाइन शैली: आधुनिक
उत्पत्ति भएको ठाउँ: चीन ब्रान्ड नाम: बेले
सामाग्री: सिरेमिक संरचना: एक टुक्रा
स्थापना प्रकार: भुइँ माउन्ट गरियो सुविधा: लुकाइएको टैंक
ड्रेनेज ढाँचा: पी जाल, एस जाल फ्लशिंग विधि: गुरुत्वाकर्षण फ्लशिंग
शौचालय कटोरा आकार: गोलो शैली: विलासिता
सामाग्री: सिरेमिक आकार: 720*370*770mm
रंग: सेतो वा अन्य स्थापना: भुइँ माउन्ट गरियो
फ्लशिंग विधि: धुलाई सीट कभर: पीपी/यूएफ
MOQ: 20sets प्याकि:: 5-प्लाई दफ़्ती
OEM: उपलब्ध छ
1000 सेट/प्रति महिना सेट
5-प्लाई मानक निर्यात दफ़्ती
कसरी आफैंले शौचालय स्थापना गर्ने?
वास्तव मा, शौचालय को स्थापना धेरै गाह्रो छैन। धेरै मानिसहरु किन्ने र यसलाई आफैंले स्थापना गर्न छनौट गर्नेछन्, त्यसोभए यो कसरी संचालित गर्ने? बस भन्नुस्।
उपकरण / कच्चा माल
सबैभन्दा नजिकको औजार
सील वाशर, आदि
1, सीवेज पाइपलाइन र जमीन बीच levelness जाँच गर्नुहोस्
यो जाँच गर्न आवश्यक छ कि त्यहाँ तलछट, फोहोर कागज र ढल निकास पाइप मा अन्य sundries को कुनै रुकावट छ। एकै समयमा, यो पनी जाँच गर्न को लागी आवश्यक छ कि शौचालय अगाडि, पछाडि, बायाँ र जमीन को दायाँ मा स्थापित छ। यदि यो असमान छ, यो समतल गर्न आवश्यक छ।
2, blowdown पाइप को केन्द्र अंकन निर्धारण
ढल पाइप को केन्द्र पुष्टि गर्नुहोस्। विधि धेरै सरल छ, त्यो हो, शौचालय पल्टाउनुहोस्, र त्यसपछि शौचालय को ढल निकास को केन्द्र मा एक क्रस केन्द्र रेखा कोर्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि तल्लो क्रस सेन्टर लाइन शौचालय र वरपरका खुट्टा को तल सम्म विस्तार गर्नु पर्छ।
3, फिक्स्ड शौचालय
पहिले शौचालय क्षैतिज रूप मा स्थापित छ सुनिश्चित गर्न को लागी, जमीन सीवेज आउटलेट को क्रस लाइन संग शौचालय लाई प align्क्तिबद्ध गर्नुहोस्, र तब सीलिंग रिंग लाई कसैले थिच्नुहोस्। अर्को चरण शौचालय ठीक गर्न को लागी लंगर पेंच र सजावटी टोपी स्थापना गर्न को लागी हो।
4, तल मुहर
शौचालय को फिक्सिंग पछि, यो सीवेज आउटलेट मा एक विशेष सील रिंग स्थापित गर्न को लागी आवश्यक छ, वा गिलास गोंद (putty) वा यसको वरिपरि सिमेन्ट मोर्टार को एक सर्कल लागू गर्न को लागी। यो सुझाव दिईन्छ कि सिमेन्ट रेत को अनुपात १: ३ हो।
5, पानी ट्यांकी सामान को स्थापना
3-5 मिनेट को लागी पानी संग पाइप फ्लश। ट्याप पानी को सफाई सुनिश्चित गर्नु अघि, कोण वाल्व र जडान नली स्थापित, र त्यसपछि स्थापित पानी ट्यांकी सामान संग नली जोड्नुहोस्।
6, कमीशन निरीक्षण
अन्तिम चरण शौचालय को निरीक्षण गर्न को लागी, जाँच गर्नुहोस् कि ड्रेन वाल्व को स्थापना स्थिति लचीला छ, इनलेट भल्भ र सील सामान्य हो, र जाम र लीकेज छ कि छैन। ध्यान दिनुहोस् कि इनलेट भल्भ एक फिल्टरिंग उपकरण संग सुसज्जित छ। यदि होईन, यो यसलाई स्थापना गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ।
अघिल्लो: २०२१ कारखाना तातो बिक्री बाहिरी व्हर्लपूल पौडी पौंडी पोखरी स्पा बाथटब
अर्को: प्लास्टिक धुने mm००mm गहिरो शावर ट्रे बेसिन मा शुद्ध सेतो क्षेत्र ड्रप
Kilgore शौचालय कारखाना
Rv शावर पान शौचालय कम्बो
शौचालय बेसिन कारखाना
शौचालय कारखाना आउटलेट
शौचालय/ बाथटब संग
सेतो शुद्ध एक्रिलिक वर्ग शावर ट्रे शावर tu ...
लक्जरी स्लाइडिंग ढोका शावर कोठा शीर्ष बत्ती संग एक ...